कुकुर बाँध्ने बे’ल्टले सुशान्तको घाँ’टी थि’चेर मा’रिएको खु’लासा – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/कुकुर बाँध्ने बे’ल्टले सुशान्तको घाँ’टी थि’चेर मा’रिएको खु’लासा
सुशान्त सिंह राजपुत केस सिबिआइको हातमा परेदेखि नै के’ससँग जोडिएका कैयौं कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। उनका फ्यानहरूलाई अब अन्तिम रिजल्टको पर्खाइ छ। किन र कसरी सुशान्तमाथि यो स’ब आइपर्यो? दोषी आखिर को हो त? यत्ति जान्न सबै उत्सुक छन्।
यसैबीच सुशान्तका पूर्व असिस्टेन्ट अंकित आचार्यले सुशान्तको ह-त्या उनकै कुकुर फजको बेल्टले घाँ-टी थि-चेर गरिएको दावा गरेका छन्। यो बयान वास्तवमै भ-यानक छ। अंकितका अनुसार, उनी हर समय चौबीसै घन्टा सुशान्तको साथमै हुन्थे। उनी सुशान्तलाई राम्रोसँग चिन्दछन्, बुझ्दछन्। त्यसैले उनी सुशान्तले गर्न सक्ने कुरा मान्दैनन्।
सुशान्तको ह-त्या उनकै पेट डग फजको बेल्टले घाँ-टी थिचेर गरिएको दावा गर्ने अंकितले अरू धेरै कुराहरूको खुलासा गरेका छन्। भारतीय मिडिया पिंक भिल्लासँग कुराकानी गर्दै अंकित भन्दछन्, “मैले सुशान्त भैयालाई राम्रोसँग चिनेको छु। उनी यस्तो काम गर्नै सक्दैनन्। म दावाका साथ भन्छु यो ह’त्या हो। जब मान्छेले देहत्याग गर्छ, तब उसको घाँ’टीमा अङ्ग्रेजी अक्षर यु आकारको (U) धर्को बस्दछ। तर सुशान्तको के’समा यस्तो थिएन।
उनको घाँ’टीमा अङ्ग्रेजी अक्षर ओ आकारको (O) धर्का पाइएको थियो। यस्तो कसैले कसैको घाँ’टी थि’च्दा मात्र हुन्छ। देहत्याग गर्दा यस्तो आकार बस्दै बस्दैन। अर्को कुरा जब कसैले आफ्नो ज्या’न लिन्छ त्यतिबेला निजको आँखा वा जिब्रो बा’हिर नि’स्किन्छ। तर सुशान्त भैयाको यस्तो भएन। मसँग त्यसबेलाका यस्ता थुप्रै फोटोहरू छन्, जसले उनको ह’त्याको व’कालत गर्छ। त्यसैले यो ह’त्या नै हो। उनको ह’त्या उनकै कुकुर फजको बेल्टले घाँटी थि’चेर गरिएको हो। अब म खुसी छु किनभने यो केस सि’बिआइको हातमा छ। म चाहन्छु, चाँडै नै ह’त्यारा प’त्ता लागोस् र उसले फाँ’सीको स’जाय पाओस्।”
सुशान्तका पूर्व असिस्टेन्टको बयान वास्तवमै दु’खद छ। सि’बिआइको अन्तिम नतिजा हेर्न भने बाँकी नै छ।
रिया चक्रवर्तीको फोन जाँच गर्दा आश्चर्यजनक खुलासा
अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्युको विषयमा जाँच गरिरहेको पटना पुलिसले कम समयमै निकै अहम प्रमाण जुटाएको छ । पटना पुलिसको अनुसन्धानमा पछिल्लो समय रिया र सुशान्तको सम्बन्ध राम्रो नभएको खुलासा भएको छ । रियाले ८ जूनपछि सुशान्तको नम्बर पनि ब्लक गरिदिएकी थिइन् । यति हुँदाहुँदै पनि रियाले सुशान्तको जासुसी गरिरहेकी थिइन् । सुशान्तको वरिपरि रियाकै मान्छेहरु थिए र उनीहरुसँग रिया निरन्तर सम्पर्कमा थिइन् ।
रियाले सुशान्तका कैयौं विश्वासपात्र स्टाफहरु निकालिदिएकी थिइन् र उनीहरुको ठाउँमा आफ्ना विश्वासपात्रहरु राखेकी थिइन् । ती सबै स्टाफहरुसँग रिया निरन्तर सम्पर्कमा थिइन् । यतिमात्र होइन रियाले सुशान्तका रुममेट सिद्धार्थ पिठानीसँग पनि लुकिछिपी सम्पर्क कायम राखेकी थिइन् । रियाले सिद्धार्थलाई फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्दिनथिन् । यसको सट्टा उनले सिद्धार्थसँग ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्थिन् । यतिमात्र होइन उनले मुम्बइका डिसीपीसँग पनि कुरा गरिरहेकी थिइन् ।
पुलिस सूत्रको हवाला दिँदै भारतीय अखबार दैनिक जागरणले लेखेअनुसार रियाको कल डिटेलमा निकै आश्चर्यजनक खुलासा भएका छन् । केही समयदेखि रियाले सुशान्तसँग भन्दा उनका स्टाफहरुसँग धेरै कुरा गरिरहेकी थिइन् । टाढा बसेर सुशान्तको बारेमा जानकारी लिइरहेकी थिइन् र उनका हरेक गतिविधिको निगरानी गरिरहेकी थिइन् । सुशान्तकी स्टाफ श्रुतीसँग रियाले १ वर्षमा ८ सयभन्दा धेरै पटक फोनमा कुरा गरेकी थिइन् । अर्का एक स्टाफसँग ५०१ पटक फोनमा कुरा गरेकी थिइन् । रियाले जुन–जुन स्टाफसँग यसरी कुरा गरेकी थिइन् ती सबैलाई रियाले नै सुशान्तको स्टाफको रुपमा राखेकी थिइन् ।
रियाले सुशान्तका रुममेट सिद्धार्थ पिठानीलाई १०१ पटक फोन गरेकी थिइन् । यस क्रममा उनले आमालाई ५३७ पटक, भाइलाई ८०० पटक र पितालाई ११०० पटक फोन गरिन् । एक फिल्म निर्देशकलाई समेत ३०० भन्दा धेरै फोन गरेकी रियाले सुशान्तलाई भने एक वर्षमा १४२ पटक फोन गरेकी थिइन् । फिल्म निर्माता महेश भट्टसँग पनि रियाले निकै लामो कुरा गरेकी थिइन् । सुशान्तको मृत्युपछि रियाले २० जूनदेखि १८ जुलाइको बीचमा मुम्बइका डिसीपीसँग ५ पटक कुरा गरेकी थिइन् ।
ब्रेकिङ्ग अनर्गल प्रचारले सीमा नाघ्यो, बकवास बन्द गर’भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई नेकपा प्रवक्ताले भने
चिनियाँ दूतावास भन्छ : भवन बनाएको क्षेत्र चीनकै हो, नेपालले थप प्रमाणीकरण गर्न सक्छ
हिजो बेलुकीपखको आयो अत्यन्तै दु:खद खबर, देखेर पनि नदेखै झै नगरौ #RIP लेखी सेयर गर्नुहोला अन्तर्राष्ट्रिय
हजारको नोटबाट हट्यो अफ्रिकी हात्तीको फोटो, पाँचसयको नोटमा रहेको विदेशी बाघ पनि हटाइयो